Power-Tụkwasịnụ Njirimara - China BST (Hongkong) Industrial
Egosipụta Power Tụkwasịnụ
Industrial Control Power Tụkwasịnụ
Rainproof Power Tụkwasịnụ
PFC Quad mmepụta
PFC Single mmepụta
PFC Triple mmepụta
450W Single mmepụta Ịmafe Power Tụkwasịnụ IRS-450w
125W Quad mmepụta Ịmafe Power Tụkwasịnụ ITQ-125W
75W Dual mmepụta Ịmafe Power Tụkwasịnụ IRD-75W
50W Triple mmepụta Ịmafe Power Tụkwasịnụ ITT-50W
E nwere ọtụtụ ihe ike-ọkọnọ e ji mara ndị na-emetụta ha ọrụ:
Kpafuo: The mgbanwe DC mmepụta voltaji dị ka a ọrụ nke oge na mgbe nile akara voltaji, ibu, na ihere okpomọkụ.
Dynamic nzaghachi: A ike ọkọnọ nwere ike n'ọrụ na a usoro ebe a chọrọ inye ngwa ngwa ike omume a mgbanwe ibu ike. Nke ahụ nwere ike ịbụ ikpe n'ihi na ibu nke elu-ọsọ microprocessors na ike-management ọrụ. Na nke a, na microprocessor nwere ike ịbụ na a na njikere ikwu na n'elu iwu ọ ga-malite ma ọ bụ gbanyụọ ozugbo, nke na-eweta elu ike okwukwo na ngwa ngwa ramp udu na ike ọkọnọ. Ịnabata microprocessor, ọkọnọ si mmepụta voltaji ga ramp elu ma ọ bụ ala n'ime a kwuru kpọmkwem oge nkeji, ma na-enweghị oké overshoot.
Arụmọrụ: ruru nke mmepụta-to-input ike (na percent), tụrụ na a nyere ibu ugbu a na elu ọnụ akara ọnọdụ (Pout / Pin).
Holdup oge: Time n'oge nke a ike ọkọnọ si mmepụta voltaji anọgide n'ime nkọwapụta esonụ ọnwụ nke input ike.
Inrush ugbu a: elu ozugbo input ugbu a dọtara a ike ọkọnọ na n'aka-on.
International ụkpụrụ: Ezipụta a ike ọkọnọ si nchekwa chọrọ na allowable EMI (akpa nnyonye) etoju.
Nweghị: Ọdụdọ nkewa n'etiti input na mmepụta nke a ike ọkọnọ tụrụ na volts. A na-abụghị ndị dịpụrụ adịpụ nwere a DC ụzọ n'etiti input na mmepụta nke ọkọnọ, ebe dịpụrụ adịpụ ike ọkọnọ mîdaha a transformer iwepụ DC ụzọ n'etiti ọsọ ọsọ na-mmepụta.
Line iwu: Change na uru nke DC mmepụta voltaji n'ihi a mgbanwe akanamde input voltaji, kpọmkwem dị ka mgbanwe na ± MV ma ọ bụ ±%.
Ibu Ibu iwu: Change na uru nke DC mmepụta voltaji n'ihi a mgbanwe ibu si na-emeghe-circuit na kacha-gosiri mmepụta ugbu a, kpọmkwem dị ka mgbanwe na ± MV ma ọ bụ ±%.
Mmepụta mkpọtụ: Nke a nwere ike ime na ike ọkọnọ n'ụdị obere achịkwaghị achịkwa elu ugboro ike. Mkpọtụ e mere site odori na n'ije nke parasitic capacitances n'ime ike ọkọnọ n'oge ya ọrụ okirikiri. Ya njupụta bụ agbanwe na pụrụ ịdabere na ibu impedance, mpụga nzacha, na otú ọ bụ n'ihe.
Mmepụta voltaji mkpụbelata: Most power supplies have the ability to “trim” the output voltage, whose adjustment range does not need to be large, usually about ±10%. One common usage is to compensate for the dc distribution voltage drop within the system. Trimming can either be upward or downward from the nominal setting using an external resistor or potentiometer.
Oge na random ndiiche (PARD): na-achọghị oge (ripple) ma ọ bụ aperiodic (mkpọtụ) ndiiche nke ike-ọkọnọ mmepụta voltaji si ya elu ọnụ uru. PARD na-kwupụtara MV elu-to-elu ma ọ bụ rms, na a kwuru kpọmkwem bandwit.
Ọgụgụ kasị elu ugbu a: The kacha ugbu a na a ike ọkọnọ nwere ike inye nwa ntakịrị oge.
Ọgụgụ kasị elu ike: The zuru kacha mmepụta ike na a ike ọkọnọ nwere ike na-enweghị mebiri. Ọ bụ a ọma karịrị nke na-aga n'ihu pụrụ ịdabere na mmepụta ike ike na kwesịrị na-eji infrequently.
Power-ọkọnọ sequencing: zipụta ha n'usoro n'aka-na na anya nke ike onunu nwere ike a chọrọ na usoro na otutu ọrụ voltages. Nke ahụ bụ, voltages ga-etinyere na a kpọmkwem usoro, ma ọ bụghị usoro nwere ike mebie. Ihe atụ, mgbe n'itinye mbụ voltaji na ọ esịmde a kpọmkwem uru, a abụọ voltaji nwere ike ramped elu, na na. Sequencing na-arụ ọrụ na agbara mgbe ike na-ewepụ, na ọ bụ ezie na-agba bụ na-emekarị dị ka ukwuu nke a nsogbu dị ka n'aka-on.
Remote on / anya: Nke a na-họọrọ n'elu switches na-atụgharị ike onunu na gbanyụọ. Power-ọkọnọ data-mpempe akwụkwọ nkọwa na-emekarị zuru ezu na DC parameters maka ime na / anya, na-edepụta ihe na gbanyụọ mgbagha etoju chọrọ.
Remote uche: A na-ahụkarị ike ọkọnọ Monitors ya mmepụta voltaji na-azụ a òkè nke ya azụ ka ọkọnọ inye voltaji iwu. N'ụzọ dị otú a, ma ọ bụrụ na mmepụta nēche ebili ma ọ bụ daa, na nzaghachi achịkwakwa ọkọnọ si mmepụta voltaji. Otú ọ dị, ịnọgide na-enwe a mgbe nile na-mmepụta na ibu, na ike ọkọnọ ga n'ezie nyochaa voltaji na ibu. Ma, njikọ si a ike ọkọnọ nke mmeputa ya ibu nwere eguzogide ma na ugbu a na-eru site na ha na-amị a voltaji dobe na-emepụta a voltaji dị iche n'etiti ọkọnọ si mmepụta na n'ezie ibu. N'ihi na ezigbo iwu, na voltaji nri azụ ka ike ọkọnọ ga-ahụ n'ezie ibu voltaji. The ọkọnọ abụọ (gbakwunyere na mwepu) remote uche njikọ nyochaa ahụ n'ezie ibu voltaji, a òkè nke bụ nke a na nri azụ ọkọnọ na obere voltaji dobe n'ihi na nke ugbu a site na abụọ n'ime ime uche njikọ dị ala. N'ihi ya, ndị voltaji etinyere ibu nke an'Iwu.
Ripple: idozi na nzacha a ịmafe ike ọkọnọ si mmepụta arụpụta ihe akanamde akụrụngwa (ripple) na-agba ịnyịnya na ya DC mmepụta. Ripple ugboro bụ ụfọdụ integral multiple nke Ntụgharị si ịmafe ugboro, nke na-adabere na Ntụgharị topology. Ripple dịtụ unaffected site ibu ugbu a, ma a pụrụ ebelata site mpụga capacitor nzacha.
Ndepụta: Mgbe iji ọtụtụ mmepụta ike onunu adịru otu ma ọ bụ karịa ndapụta na-eso ọzọ na mgbanwe akara, ibu, na okpomọkụ, nke mere na onye ọ bụla na-ekwusi otu proportional mmepụta voltaji, n'ime kpọmkwem nsuso ndidi, na-akwanyere a nkịtị uru.
Post oge: Apr-23-2018
Unit 406, Jinhui Building, Chenjiang Middle Street, Zhongkai Hi-tech Mpaghara, Huizhou City, Guangdong Province, China.
Ekwentị: + 86-0752-3220212